कथाः चाप्लुसीको कला - Sutra News
कथाः चाप्लुसीको कला
सन्तोष राना क्षेत्री
एउटा देशमा एकजना राजा थिए, जो आसेपासे र प्रशंसकहरूसँग मात्र बस्न रूचाउँथे । आलोचक उनलाई मनपर्दैनथ्यो । राजाको यही स्वभाव बुझेर चाटुकार-चाप्लुसीबाजहरू उनको वरिपरि चक्कर लगाइरहन्थे ।
एकदिन दरबार नजिकैको जंगलबाट केही स्यालहरू कराइरहेको आवाज राजाले सुने र आफ्ना ती ‘खास मान्छेहरू' सँग सोधे, ‘स्यालहरू किन रोईरहेछन् हँ ?
आसे-पासेहरूले भने, ‘महाराज ! स्यालहरू भोकै छन्, खानेकुरा दियो भने रुदैनन् । राजाले आदेश दिए- यी लेऊ पैसा, तिनीहरूलाई दानापानीको व्यवस्था गर्नू ! चाटुकारहरूले त्यो रुपैयाँ/पैसालाई एकापसमा बाँडेर राजाको आदेश तामिल गरे ।
दोस्रो दिन स्यालहरू फेरि रोईरहेथे । राजालाई स्यालहरू पुनः रुनुको कारण जान्न मनलाग्यो र सोधे- अब किन रोइरा’छन् ? आसे-पासेहरूले भने- स्यालहरू जाडोले रोइरहेछन्, उनीहरूलाई केही ओढ्ने-ओछ्याउने लुगाफाटो दियोभने रुन बन्द गर्छन् ।
राजाले स्यालहरूलाई कम्बल बाँड्ने आदेश दिए । चम्चेहरूको दिन चम्क्यो । आपसमा फेरि बाँडीचूडी खाए । तर रात पर्दानपर्दै स्यालहरू रोएको आवाज पुनः सुनियो । अब यिनीहरूलाई के चिजको आवश्यकता पर्‍यो भनेर राजाले सोधे । ‘बस्ने घर मागिरहेछन् महाराज ! भनेर चाप्लुसहरूले उत्तर दिए । राजाले तुरुन्त स्यालहरूको लागि बासको व्यवस्था गर्ने आदेश दिए । खुरापातहरूलाई फेरि खुदो पल्ट्यो ।
अर्को दिन बिहान हुँदानहुँदै स्यालहरू फेरि चिच्याइरहेथे । राजालाई आश्चर्य भो । राजाले सोधे– अब के कुरामा यिनीहरू चिच्याइरा’छन् ? तब खुशामद गर्नेहरूले भने– महाराज ! हजुरले यिनीहरूको सारा माग पूरा गरिदिनुभयो ।
त्यसैले यिनीहरू अत्यन्त खुसी भएर हजुरको दीर्घायुको कामना गर्दै जिन्दावादको नारा लगाइरहेछन् । अब यिनी (स्यालहरू) सधैं हजुरको सम्मानमा बिहान-दिउँसो-बेलुका-राती जिन्दावादको नारा लगाएर कराइरहनेछन् ।
चाटुकारहरूको कुरा सुनेर राजा खुशी भए । अच्छी-खासी पैसा कमाएकाले (चम्चेहरू) पनि खुशी भए । तर राजालाई के थाहा ? कराउनु त स्यालहरूको धर्म हो, गुण हो । हुँ...ऊँ...हुँ...ऊँ... गर्दै रुनु स्यालको स्वभाव नै हो । उनीहरू त्यही धर्म पूरा गर्दैथिए ।
जान्नुपर्ने कुरा, चाप्लुसीको कलामा निपूर्ण मान्छेहरू नदी तरे लगत्तै माझीलाई लात मार्ने कलामा पनि निपूर्ण हुन्छन् । ख्याल गरौं है !
प्रकाशित :माघ १८, २०७७ आइतवार - १६:१२:०४
# चाप्लुसीको कला
सञ्जुको ‘इन्द्रेणी स्पर्श’ बजारमा
‘मोहपथ’ लाई कर्णाली साहित्य समाज कृति पुरस्कार
उक्लिएको मान्छे अर्थात भक्तराज
कविताः धर्तीले राजनेता पाएको दिन
महाकवि हिंड्ने चित्लाङका ती बाटा
प्रेमबहादुर बोहराको पहिलो कृति ‘कोग्ले’ सार्वजनिक